Rapoo VT300 IR Optical Gaming Mouse (Black) ~ ICT.com.mm
HomeRapoo VT300 IR Optical Gaming Mouse (Black)
Rapoo VT300 IR Optical Gaming Mouse (Black)
New Black Technology e-sports mouse, adjustable high-definition tracking engine. Big mouse for right hand use5Levels adjustable DPI ( 800 – 6200DPI ) LED multi-color light system PMW3327 optical gaming sensor... [Learn more]
Brand: RAPOOFilter by: Gaming Mice, ICB, Mice
New Black Technology e-sports mouse, adjustable high-definition tracking engine.
Big mouse for right hand use
5 Levels adjustable DPI ( 800 – 6200DPI )
PMW3327 optical gaming sensor
Durable micros-witch with 16 million life times
PC ဂိမ်းတွေကစားတဲ့ Gamers တွေအတွက်ကတော့ အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ Gaming Mouse တစ်ခုပိုင်ဆိုင် ထားပါမှ ပြိုင်ဘက်တွေထက် နှာတစ်ဖျားသာစေမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မိမိကပြိုင်ဘက်ထက်ပိုသာတဲ့ Skills တွေရှိရင်တောင် မိမိ Mouse ရဲ့ Response နှေးကွေးမှုကြောင့် ရှုံးနိမ့်မှုတွေကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အခု မိတ်ဆက်ပေးမယ့် Rapoo အမှတ်တံဆိပ် Optical Gaming Mouse ကတော့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ Gaming Mouse လေးပါ။ ဒီ Mouse မှာက high-definition tracking engine ကိုအလွယ်တကူ Adjust လုပ်နိုင်လို့ သေနတ်ပစ် Game တွေနဲ့ Counter-Strike လိုမျိုး Game တွေကစားရာမှာ မိမိရဲ့ရန်သူပစ်မှတ်ကို ပိုမိုမှန်ကန် စွာ ပစ်ခတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ DPI Level ကို (၅) ခုအထိ မိမိစိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်သလို (800) DPI ကနေ (6200) DPI အထိ ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ LED multi-color light စနစ်ပါရှိတဲ့အပြင် Programmable Button က (၁၀) ခုအထိပါရှိတာကြောင့် Dota2နဲ့ အခြား Hotkeys များနဲ့ကစားရတဲ့ Game တွေကိုဆော့ကစားရာမှာ ပိုမို အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါတယ်။ ဒီ Mouse မှာက PMW3327 optical gaming sensor ကိုအသုံးပြုပေးထားလို့ ရွှေ့လျားမှုပိုင်းမှာလည်း တိကျသေချာစေမှာပါ။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ Gamers တွေအကြိုက် ဆော့ကစားရာမှာ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် Grip ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အရောင်အနေနဲ့ကတော့ အနက် ရောင်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။